Gadoo Dammaqajelchitu - Storybooks Kenya
Gadoo Dammaqajelchitu The Honeyguide's revenge Kisasi cha Kiongozi
Seenaan kuni wa’ee Nagade, dammaqajelchituu; fi nama sassattu dardar tokko kan Ginigilee jedhamaniti. Gaftokko Yeroo Gingileen admsa dhaqe, waamicha Nagade dhagahe. Afaan Gingilee damma yaade jennaan bayee hawwee. Gingileen dhabbatee dhageefate lafaa simbirron suni jiritu barbaade. Simbirroon xiqqoon sunis, “chitiik-chitiik-chitiik” jechaa muka tokko irra gara biraati cetee. Chitiik, chitiik jechuu dhifte Gingileen duuka dhufu isaa mirkaneesuf.
Sa’ati walakka booda, hundii isaani mukka gudda tokko jala gahan. Nagade akka nama maratee dameewan gubbaa figee. Boodas damee tokko gubbaa ta’ee mataa isaa gara Gingilee qabee, “Asii kunooti, Kootu as, maltu sitursiise?” Gingileen garauu kannisa tokko ille hinagaree garu Nagade amane.
Kanaafu Gingileen eboo isaa mukaa jala ka’ee, mukaa goggogaa waltti qabee ibidda qabsiee. Yeroo ibiddichi sirriti boba’uu mukaa dheraa tokko ibiddicaha kessa ka’ee. Mukti kuni aara bayee umuudhan beekama. Amma mukaa sana koruu calqabee, mukaa gara qnaqee hinqbnee afaanti qabatee.
Yerooma sana sagaale kannisa dhagahee. Kannisonni sunis holqaa mukaa kessaa bahan. Gingileen yeroo holqaa kannisaa bira gahu aara sana gara afaan holqichaati qabee. Kannisnis aarani holqichaa kessaa badani deeman. Aaraa sana waan jibbaniif baqatani sokkan. Otto hinsokkin dura garuu Ginglee hiddani turan.
Yeroo kannisonni alaati bahan, Gingileen harka isaa gara holqati galche. Biddeen damma walalaa bayee qabu argate. Damma sana sutaa jedhee korojooti naqatee sutaa jedhe mukkarra bu’ee.
Nagadeen waan Gingileen hojjacha turee ilaala ture. Innis damma gudda isaa akka kennati eggachaa ture. Nagadenis damee irraa dameet utaalun gara lafaati dhihate. Dhummarrati Gingileen lafa gahe. Nagadeenis dhakaa gubbaa ta’ee kennaa isaa eggatee.
Hata’u maale Gingileen ibdda dhamsee, eboo isaa qabatee Sibirricha dhisee gara mana isaa deeme. Nagaden aaree, akan jedheen. “vik-tor. vik-torr!” Gingileen dhaabbate, ijaa ittibasee akkan jedheen, “damma xinnoo barbaadee, ati hiriyaa kiyya moo? Hojii maraa anumatu hojaatee. Damma kana maliifan siqooda?” Sana booda nideeme. Nagaden bayee aaree! Hali kun garu mit. Garuu gaddo itti bahuu danda’aa.
Turbaan bayee booda, gaftokko Gingileen sagaale damma himaa Nagadee dhagahe. Damma walalaa sana yadatee Nagade dukaa bu’ee. Eega Gingilee karaa ittiagarsisuu calqabee booda boqachudhaf mukaa tokko jala ta’ee. “Ahha, holqii kannisaa asi jiraachu qaba” jdhee yadee. Hatataman mukaa aara isaa qabsifatee mukkicha koruu calqabe. Nagaden ta’ee ilaala ture.
Gingileen mukkicha yeroo koruu garu sagaale kannisa dhagahu dhisuun isaa isa dinqisiisa ture.” Holqichii gaddii fagachuu qaba jedhe yadee.” Damee biraa irra koree. Garuu holqaa kannisaa otu hinta’in fula qeransaa arge. Qeransichis hiribaa isaa irra waan dammaqeef bayee aare. Ija fi afaan ishee banudhaan ilkaan ishee hamam akka cimaa ta’e agarsiste.
Otoo qeransichi itti hin utaalin, Gingileen dafee mukarra bu’ee. Otoo muddamu damee tokko qolee lafati akka maleeti kufee caphee. Akka carraa ta’e qeransci hirribarra hinkanee wantureef. isa dukaa hinbunee. Nagaden, dammaqajelchitun, gaddod Gingileeti batee. Gingileenis barnoota bayee argate.
Ijoolen Gingilee yeroo seenaa Nagadee dhagahan bayee simbirroo kana kabajan. Yeroo damma muraan hundaa, damma bayee dammaqajelchitudhaf dhissan.
Ayyaana akko wajjiin Waan Vusi waa’ee obboloetti ishe jette Muzaa Akko